एउटा कुकुरको टाउकाको मूल्य नै ८० लाख !
कोशी अनलाइन बिहिबार, १७ साउन, २०७५ मा प्रकाशित
सुन्दै अचम्म ! कुनै कुकुरको दाम नै करोड आसपास पर्छ भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर, यो सत्य हो । दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियामा एउटा कुकुरको मूल्य नै करिब करोड आसपास तोकिएको छ ।
कोलम्बिया देश लागूऔषध तस्करीका लागि कुख्यात देशमा पर्छ । त्यहाँ निकै ठूला कारोबारी रहेको बताइन्छ । तर, पछिल्लो समय एउटा कुकुरले कोलम्बियाका धेरै तस्करको निद हराम गरिदिएको छ ।
सोम्ब्रा नामक उक्त कुकुरले २ वर्षमा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबर मूल्यको लागूऔषध जफत गर्न प्रहरीलाई मदत गरेको छ । उक्त कुकुरलाई प्रहरीले प्रयोग गर्ने गर्छ । त्यसै कुकुरले थुप्रै लागूऔषध कारोबारीलाई अहिले समस्यामा पारेको छ ।
अहिले आएर ती नै लागूऔषध कारोबारीले कुकुरको टाउकाको मूल्य तोकेका छन् । उनीहरूले उक्त ‘जासुसी कुकुर’लाई जिउँदै वा मारेर जिम्मा लगाउनेलाई ८० लाख रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा तस्करले गरेका छन् ।
कोलम्बियाको पुलिस आफैंले यस कुकुरबारे सामाजिक सन्जालमा ट्वीट गर्दै उसको योगदान र कामको जानकारी दिएको थियो । खबरमा उल्लेख भएअनुसार सेफर्ड जातको सोम्ब्रा कुकुर पछिल्लो दुई वर्षययता कोलम्बियाको पुलिस विभागको एक कर्मचारीका रूपमा रहँदै आएको छ ।
बताइएअनुसार कुकुरको भूमिकामा स्थानीय प्रहरीले हालसम्म अढाई सय अपराधीलाई पक्राउन गर्न सफल भएको छ । यस कुकुरलाई अधिकांश समय त्यहाँका मुख्य एयरपोर्टमा काममा खटाइन्छ ।
बताइएअनुसार सोम्ब्राले सन् २०१६ को मार्चदेखि लागूऔषध कारोबारीविरुद्ध कारबाही तीब बनाएको थियो । उक्त कुकुरमा लागूऔषध सुँघेर पत्ता लगाउने विशेष क्षमता रहेको छ ।